Covid - 19 ကူးစက်ခံရသူ ၁နှစ်၆လအရွယ် ကလေးလေးအတွက် မိခင်ချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မိုးယုစံ - Cele Connections
စကားဝဲဝဲလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး မိုးယုစံက ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နှင်းဆီအငြိမ့်သဘင်ရဲ့ ပင်တိုင်စံ အငြိမ့်မင်းသမီးလေးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးယုစံက အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်း အရင်ကလောက် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ မလုပ်ကိုင်ဖြစ်ပဲ သူမရဲ့ သားလေး ကောင်းသိင်္ခမိုးသူကိုသာ အချိန်ပေး ဂရုစိုက်ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးယုစံက မနေ့က သတင်းတက်လာတဲ့ Covid – 19 ကူးစက်ခံရတဲ့ ၁နှစ်၆လအရွယ် ကလေးလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးယုစံက “၁နှစ်၆လတဲ့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။ ကိုယ့်သားလေးထက်တောင်ငယ်သေးတာ။ ကိုယ်တိုင်က အသားနာမှာအရမ်းကြောက်တတ်သူဆိုတော့ တွေးရင်းနဲ့တောင်မခံစားနိုင်ဘူး။ ကလေးရယ်..ဘယ်လိုများနေမလဲ? မိဘတွေလည်းသနားမိတယ်။ ကိုယ်ဆိုခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။” ဆိုပြီး မိဘချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ပြောထားပါတယ်။
မိုးယုစံကတော့ မိခင်တစ်ယောက်ပီပီ ကိုယ့်ကလေး နေမကောင်းရင် စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
Covid – 19 ကူးစကျခံရသူ ၁နှဈ၆လအရှယျ ကလေးလေးအတှကျ မိခငျခငျြး ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ စိတျမကောငျးဖွဈနတေဲ့ မိုးယုစံ
စကားဝဲဝဲလေးနဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မငျးသမီးလေး မိုးယုစံက ဗီဒီယိုဇာတျကားတျောတျောမြားမြားမှာ သရုပျဆောငျခဲ့ပွီး နှငျးဆီအငွိမျ့သဘငျရဲ့ ပငျတိုငျစံ အငွိမျ့မငျးသမီးလေးတဈလကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ မိုးယုစံက အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး အရငျကလောကျ အနုပညာလုပျငနျးတှေ မလုပျကိုငျဖွဈပဲ သူမရဲ့ သားလေး ကောငျးသိင်ျခမိုးသူကိုသာ အခြိနျပေး ဂရုစိုကျဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိခငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မိုးယုစံက မနကေ့ သတငျးတကျလာတဲ့ Covid – 19 ကူးစကျခံရတဲ့ ၁နှဈ၆လအရှယျ ကလေးလေးအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတယျ။
မိုးယုစံက “၁နှဈ၆လတဲ့ စိတျထဲမကောငျးဘူး။ ကိုယျ့သားလေးထကျတောငျငယျသေးတာ။ ကိုယျတိုငျက အသားနာမှာအရမျးကွောကျတတျသူဆိုတော့ တှေးရငျးနဲ့တောငျမခံစားနိုငျဘူး။ ကလေးရယျ..ဘယျလိုမြားနမေလဲ? မိဘတှလေညျးသနားမိတယျ။ ကိုယျဆိုခံနိုငျရညျရှိမှာမဟုတျဘူး။” ဆိုပွီး မိဘခငျြးကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ ပွောထားပါတယျ။
မိုးယုစံကတော့ မိခငျတဈယောကျပီပီ ကိုယျ့ကလေး နမေကောငျးရငျ စိုးရိမျပူပနျတတျတဲ့ စိတျခံစားခကျြနဲ့ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျနျော။
သမီးတွေကို ဝိတ်ကျစေချင်တဲ့အတွက် ဆုကြေးအဖြစ် ဒေါ်လာငွေတွေပေးပြီး စနစ်တကျပြုပြင်ပေးနေတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
ငယ်ငယ်က ဖန်သားပြင်မှာပဲ မြင်ဖူးခဲ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ အတူတူ ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရလို့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး